TOAMASINA : ZANAKA POLISY VOAROAKA NY IRAY TAMIN’IREO VOAROHIROHY HO MPANAO FANAFIHANALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYTOAMASINA : ZANAKA POLISY VOAROAKA NY IRAY TAMIN’IREO VOAROHIROHY HO MPANAO FANAFIHANA
TOAMASINA : ZANAKA POLISY VOAROAKA NY IRAY TAMIN’IREO VOAROHIROHY HO MPANAO FANAFIHANA
Mpitandro ny filaminana voasaringotra tamina raharaha fakana an-keriny ny rain’ny iray tamin’ireo tovolahy noraisim-potsiny izay voalaza fa teo am-panomanana fanafihana tao Toamasina I, ny alahady teo. Efa voaroaka tamin’ny asany ilay raim-pianakaviana ary misazy any am-ponja amin’izao fotoana izao
Tarana-boanjo foto-boanemba? Mpitandro ny filaminana voaroaka ny rain’ny iray tamin’ireo roalahy tra-tehaky ny Zandary tao Mangarivotra, Toamasina I, ny alahady teo. Voalaza fa teo am-pikasana ny hanafika “kiosque” izy ireo no voafandrika.
“Efa ela no nikarohana azy ireo noho ireo famakiana “kiosque” maro nifanesy teto Toamasina. Nangonina ireo torohay, natao ny fanarahan-dia ka izao noraisim-potsiny izao ireto jiolahy ireto”, araka ny tatitra voaray avy eo anivon’ny mpitandro ny filaminana any an-toerana.
Tsy tanteraka vokatr’izany ny fikasan-dratsin’izy ireo. Voasambotra ny roalahy saingy tafaporitsaka niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana kosa ireo namany hafa. Tovolahy vao erotrerony, 22 sy 25 taona monja, no tsy afa-bela ka avy hatrany dia nentin’ny Zandary natao fanadihadiana. Nandritra izany ihany koa no nanaovana ny fisavana azy ireo. “Puces” telopolo isa mahery no tratra tany am-paosin’izy ireo, izay voalaza fa isan’ireo singa hanaporofoana ireo asa fanafihana “kiosque” vitan’izy ireo teo aloha.
Nandritra io famotorana io ihany koa no nahafantaran’ny Zandary fa mpitandro ny filaminana teo aloha ny rain’ny iray tamin’ireo voarohirohy ireo. Ity farany izay fantatra fa voasaringotra tamina raharaha fakana an-keriny tany Toamasina.
“Kidnapping” Annie sy Arnaud
Io mpitandro ny filaminana efa voaraoka io dia fantatra fa isan’ireo nandray anjara tamin’ny fakana an-keriny an’i Annie sy Arnaud, tamin’ny faran’ny taona 2015, tao Toamasina. Niroso ny fanadihadiana ka saron’ny mpitandro ny filaminana izy. Nandraisan’ny lehibeny fanapahan-kevitra ny momba azy ka voaroaka tsy ho mpitandro ny filaminana intsony izy avy eo. Niatrika famotorana amin’ny maha olon-tsotra azy noho io raharaha fakana an-keriny io indray ity Polisy voaroaka ity taorian’izay.
Efa mamita sazy any am-ponja ilay raim-pianakaviana amin’izao fotoana izao, raha ny fampitam-baovao voaray hatrany. Nahazo fahafana vonjimaika omaly hariva anefa izy ireo araka ny valin’ny fampanoavana tany an-toerana.
Partager la publication "TOAMASINA : ZANAKA POLISY VOAROAKA NY IRAY TAMIN’IREO VOAROHIROHY HO MPANAO FANAFIHANA"